Guddiga Baarlamaanku u Saarey Arrinta Qalbidhagax oo Guddoomiye iska Dhex Doortay
Monday September 25, 2017 - 11:48:56 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Guddiga uu dhawaan magacaabey Afhayeenka Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaaliga ah Maxamed Sheekh Cismaan ayaa yeeshay fadhigoodi u horeeyey waxaana ay iska dhex doorteen guddoomiye, kuxigeenkiisa iyo xoghayn.
Guddoga ayaa doortey in guddoomiyaha guddiga uu noqdo Xil. Cali Yusuf Cali, (Cali Xoosh), oo horey Puntland uga soo noqdey Wasiir ku-xigeenkii Arrimaha gudaha 2009-2013, halka guddoomiye ku xigeen loo doortgey Cabdirisaaq Maxamed Cumar oo horey u soo noqdey Wasiirkii Amniga ee Jamhuuriaydda Federaaliga ah. Xildhibaan Hani Maxamed Aadam ayaa la isku raacay in ay noqoto xoghayaha guddiga.
Guddigan oo ka kooban 15 Xildhibaan ayaa laga sugayaa in bartamaha bisha Oktoobar ay ka soo talo bixiyaan go’aankii Xukuumadda federaalku ku gaartey in ay Itoobiya ugu gacan geliso Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbidhagax) oo ka tirsanaa Jamhadda ONLF ee ka dagaalanta dhulka Soomaalidu degto ee Itoobiya.
Muranka ka dhashey dhiibtitaanka Qalbidhagax ayaa saameyn weyn yeeshay, qaabka loo soo qabtey, sida deg-deg ah ee loo dhiibey iyo weliba xujada loo cuskadey, sidoo kale waxaa canbaareeyey hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha.